သိန်းတစ်ရာရှိရင် ၂၀၀၇မော်ဒယ်အထက်ကားတင်သွင်းလို့ရတော့မည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သိန်းတစ်ရာရှိရင် ၂၀၀၇မော်ဒယ်အထက်ကားတင်သွင်းလို့ရတော့မည်။
Posted by ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း on May 11, 2012 in Copy/Paste, Myanma News, Society & Lifestyle | 16 comments
မေလ(၁၀)ရက်နေစွဲပါ၊ 7Day News Journal မှာပါရှိလာတဲ့ သိန်း(၁၀၀)ရှိရင် ၂၀၀၇ အထက်မော်ဒယ်ရှိအိမ်စီး ၁၃၅၀စီစီ ကားများကို ပါမစ်မလိုပဲ တင်သွင်းလို့ရပါပြီဟုဖေါ်ပြထားသည်ကို သစ်ထူးလွင်ဆိုဒ်မှဖတ်ရှုမိ၍ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါသည်။
အမှန်တစ်ကယ်သာ သာမာန်လူတန်းစားတွေ သိန်း(၁၀၀)နဲ့ ၂၀၀၇မော်ဒယ်အထက်ကားတွေစီးနိုင်ပီဆိုရင်တော့ ၀မ်းသာစရာပါပဲဗျို့…
လူတိုင်းကားစီးနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတွေရှိလာနိုင်ပီပေါ့…ဆိပ်ကမ်းအရောက် us$5000 တန်ကို က.ည.နအခွန်အပြီးအစီး သိန်း(၁၀၀)၀န်းကျင်ပဲကျမယ်ဆိုတော့…တစ်ကယ်ပဲလားမောင်တို့ရယ်…တစ်ကယ်ပါပဲဆိုရင်တော့ တရုတ်ပြည်က ချယ်ရီဝါဂွန်တွေ၊ကုလားပြည်က တာတာ တွေ၊နားပြီးပေါ့နော်…
အဲ…အဲ..နောက်ပြီးတော့ ကားတွေများလာတော့ လမ်းတွေကျပ်ပြီပေါ့နော်…ကားထားစရာနေရာတွေ(Car Parking)စနစ်တစ်ကျရှိဖို့လိုပြီပေါ့နော်…မဟုတ်ရင်တော့ ယာဉ်ကျောပိတ်ဆို့မူတွေတိုးလာပြီး သွားရေးလာရေးတွေမှာ ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။မြို့နယ်တိုင်းမှာ Free Parking နဲ့ Pay Parking တွေကို စနစ်တစ်ကျစီမံဖို့အထူးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြို့လည်ခေါင်က ကန်ထရိုက်တိုက်တွေမှာနေသူတွေရဲ့ ကားတွေကို Parking Zone ခွဲထားပြီး၊စီမံသင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ယခုအခြေအနေအတိုင်း မှန်ကန်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ လူလပ်တန်းစားများ ကားကောင်းစီးနိုင်တော့မယ့်အခွင့်အရေးပါပဲ။အိမ်ထောင်စုအလိုက် ကားအရေအတွက်ကိုလည်း ကန်ုသပ်ဖို့လိုအပ်ပါမည်။
အေးချမ်းသာယာမည်…ဟေ့…နါဂါးနီတစ်ဂိုးနဲ့…လူတိုင်း ပါရာဒို စီးနိုင်မည်။
ကိုဇော်မင်းရေ ၂၀၀၇ မော်ဒယ်ကို ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ၀န်းကျင်နဲ့ ဘာကားအမျိုးအစားတွေ ရနိုင်မလည်း ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ၊
ကညန အခွန်က ၁၆၅%ဆိုတော့၊ ကားကို ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ နဲ့သာ ရခဲ့ရင် ၅၀၀၀x၈၅၀=၄၂၅၀၀၀၀ိ/ ကိုအခွန် ၁၆၅% ပေါင်းပြီး ၇၀၁၂၅၀၀ကျပ် အပြင်
ဘာတွေ ထပ်ကုန်အုံးမလည်းဆိုတာ သိတဲ့လူများရှိရင် ပြောပြပေးကြပါခင်ဗျာ
၂၀၀၇ မော်ဒယ်ကို ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ၀န်းကျင်နဲ့ ဗင်ကားအမျိုးအစားပဲရနိုင်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး ဆလွန်း တွေ ၀က်ဂွန်တွေရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကညန အခွန်ကတော့ ၁၆၅% ဆိုတာ ၂၀၀၀ စီစီနဲ့ ၅၀၀၀ စီစီကြားကားတွေမှာကျမှာဖြစ်ပြီး ၁၃၅၀ စီစီ အောက်ဆိုရင်တော့ ၁၁၅% သာကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၃၅၀ စီစီနဲ့ ၂၀၀၀ စီစီကြားဆိုရင်တော့ ၁၄၅% ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခြားကုန်ကျစာရိတ်ကတော့ လေလံဆွဲခ၊ ပါမစ်နဲ့ LC ဖွင့်ခ နဲ့ ကားထုပ်ခ စုစုပေါင်း သိန်း ၂၀ ခန့်မှန်းခြေထပ်ကုန်ပါ့မယ်။
ဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင် aution ဝင်ပါမည်တဲ့ဗျ ….
ဆိုက်ကားတောင် မဆွဲနိုင်တဲ့ဘ၀မှာ ဒီအကြောင်းတွေဖတ်ရတာ လူကိုကြိုတုပ်ပြီး စက်စီဒန့် စ် လာကပြနေသလိုပဲခံစားရတယ်
ဟုတ်ပ ကိုဗိုက်ရေ ဒီမှာဖြင့် အရက်သောက်စရာကို တစ်ပတ်တစ်ခါပြည့်အောင်မနဲသောက်နေရတာ… အေ
တို့လည်း မင်းလိုပါပဲ .. လို့ ပြောရတော့မှာပဲ …
ကား မပြောနဲ့ဦး၊ ဖုန်းတောင် ငါးထောင်တန် ဘယ်တော့ ပေါ်လာမလဲ စောင့်နေရဒါ ..
အဲဒါ .. အဲဒါ .. ကျုပ်တို့ ဘဝပါလို့ …
မှန် ပ နဂါးနီ တစ်ဂိုးနဲ့ ဆတ်လဲ စီးနိုင်ပါတော့မယ်။
ဒန်. တန် တန်
ကျုပ် စာအုပ်ကြားညှပ်ပြီး သိမ်းထားတဲ့ တစ်ရာတန် အနွမ်းလေး ဘယ်ရောက်သွားလဲ..
စလစ်ဈေး 150 ပေးလိုက်ရတာပါ
ဖုန်းတွေလူတော်တော်များများကိုင်နိုင်သလို ကားတွေလည်းလူတော်တော်များများစီးနိုင်တော့မယ်ပေ့ါ …… လမ်းတွေထပ်ချဲ့ရတော့မယ် ဦးဦးရဲတွေလည်းထပ်ခန့်ရတော့မယ် …… နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာတော့ထိခိုက် တော့မှာပဲနော် ……..
ရသေ့စိတ်ဖြေ တောမှာ လယ်တကွက်စီလောက် ၀ယ်ပြီး ပတ်မောင်းနေကြတာပေါ့ဗျာ..
တဖြည်းဖြည်းတော့ ကားလာတော့မှာပဲ ..နား..
…http://www.prosperjp.com…မှာ သင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် အမှန်တစ်ကယ်တင်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်မှာဖွင့်လစ်ထားသော ကားအေဂျင့်ဆီတွေမှ မှာယူတင်သွင်းတာပိုစိတ်ချရမယ်ထင်ပါတယ်။
လူစီးယာဉ်စက်စွမ်းအား၁၃၅၀နှင့်အောက်၅၀ရာခိုင်နှုန်း၊၁၃၅၀စီစီမှ၂၀၀၀စီစီအထိ ၈၀ရာခိုင်နှုန်း၊၂၀၀၁စီစီမှ၅၀၀၀စီစီအထိ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း၊၅၀၀၀စီစီနှင့်အထက် ၁၂၀ရာခိုင်းနှုန်း တို့ကို က.ည.နမှကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများဖြစ်ပါတယ်။
ဘဏ္ဍရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနမှကောက်ခံသည့်နှုန်းထားတွေကတော့ ၂၀၀၀စီစီအောက် Custom Duty ၃၀ရာခိုင်နှုန်း၊Commercial Tax ၂၅ရာခိုင်နှုန်း၊၂၀၀၀စီစီနှင့်အထက် Custom Duty ၄၀ရာခိုင်နှုန်း၊Commercial Tax ၂၅ရာခိုင်နှုန်း(Custom Duty =CIF တန်ဖိုးx Exchange Rate)
၊၂၀၀၁စီစီမှ၅၀၀၀စီစီအထိ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း၊၅၀၀၀စီစီနှင့်အထက် ၁၂၀ရာခိုင်းနှုန်း တို့ကို က.ည.နမှ
၂၀၀၀စီစီအောက် Custom Duty ၃၀ရာခိုင်နှုန်း၊Commercial Tax ၂၅ရာခိုင်နှုန်း၊
၂၀၀၀စီစီနှင့်အထက် Custom Duty ၄၀ရာခိုင်နှုန်း၊Commercial Tax ၂၅ရာခိုင်နှုန်း
(Custom Duty =CIF တန်ဖိုးx Exchange Rate)
cif ဈေးတွေသိချင်ရင် ဒီလင့်မှာ သွားကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ကျတော်ဆို စိ်ိတ်ကူးနဲ့တွက်ပြီး ဆယ်စီးလောက်တောင်သွင်းပြီးပြီ.း)http://www.commerce.gov.mm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=95&lang=my